Mogadishu Journal » Soomaaliya oo ka qeyb galaysa shirka hay’addaha socdaalka
Soomaaliya oo ka qeyb galaysa shirka hay’addaha socdaalka
Mjournal :-Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa ka qeybgaley shirka Hay’adaha Socdaalka ee wadamada dhaca geeska Africa oo ka socda Magaalada Nairobi ee dalka kenya.
Shirkaan oo looga hadlayo isku socodka iyo Xuduudaha ayaa waxaa ka soo qeybgaley Agaasinnada hay’adaha Socdaalka ee wadamada Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Djibouti, Sudan iyo South Sudan, waxaana shirka soo qabanqaabiyey Hay’adda Socdaalka Adduunka.
Ujeedka shirkaan ayaa ah iskaashi joogto ah oo laga yeesho socdaalka iyo fududeynta isku’ socodka. Dalalka shirka ka qeybgaley ayaa ah wadamada inta badan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u socdaalaan sababo kala duwan, iyada oo ay jiraan dhibaatooyin ay ku qabaan socdaalka wadamada Geeska Africa.
Wefdiga hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee shirka ka qeybgalaya ayaa soo bandhigey cabashooyinka la xariira socdaalka ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo wadashaqeyn la’aanta hay’adaha ay khuseyso. Sidoo kale wefdiga Soomaaliya ayaa kulamo doceed gaar ah la yeeshey madaxda socdaalada ee shirka ka soo qeybgaley.
Wafdi ka socda Ururka Iskaashiga Islaamka oo Muqdisho soo gaaray